B&B Le Nid Doux, Renard, conviviality, gastronomy - I-Airbnb
B&B Le Nid Doux, Renard, conviviality, gastronomy
Vresse-sur-Semois, Wallonie, i-Belgium
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Steven
U-Steven unokuphawula okungu-22 kwezinye izindawo.
I-Le Nid Doux imele ukuthula okumsulwa enhliziyweni ye-Namur Ardennes kuhlanganiswe ne-gastronomy. Woza uzosithola, ujabulele futhi unambithe lokho thina kanye nesifunda sase-Vresse-sur-Semois esikunikezayo. Kunemizila eminingi yokuhamba nokuhamba ngamabhayisikili, imisebenzi yangaphandle nezindawo ezithakaselwayo endaweni, kodwa ngaphezu kwakho konke ukuthula nemvelo kubaluleke kakhulu lapha!
Sikunikeza konke ukuze ube nokuhlala kamnandi. Ukuzola, ukwamukela ngobungane, indawo ezungezile enhle, ibhulakufesi eliningi elinikeziwe (kufakwe nenani lekamelo) nalabo abathanda ukuqabuleka bangaphumula echibini lethu lokubhukuda elishisayo.
Kusukela sisebancane, salahlekelwa izinhliziyo zethu eBelgian Ardennes. Ngemva kokuhlala kule ndawo enhle iminyaka engu-10 nezingane zethu ezimbili, salithola leli tshe eliyigugu esigodini saseSemois. Iphupho lifezekile! Sizojabula ukukwamukela kwelinye lamagumbi ethu ezivakashi futhi, uma uthanda, sikonakalisa ukudla kwakho ngokuhlanganyela nathi kusihlwa etafuleni lethu lezivakashi.
I-wifi yamahhala iyatholakala kuyo yonke indawo yokuhlala kanye nasethaleni nasechibini.
Izilwane ezifuywayo azivunyelwe futhi indawo yethu yokuhlala ayibhemi. Ukubhema kuvunyelwe ngaphandle.
Izithuthuthu namabhayisikili kungafakwa ngokuphephile ngaphakathi kwegalaji lethu.
Indawo yokupaka yangasese
Hlola ezinye izinketho ezise- Vresse-sur-Semois namaphethelo